Sida loo sameeyo loona fahmo matoorada Stirling - Ikkaro
Qeybtaan waxaan ku guda galaynaa matoorrada walaaqaya, qeexitaanka, nooca matoorada kiciya iyo tusaalooyinka dhismaha iyo codsiyada.
Waxaan hada u abuurnay qayb ka mid ah matoorada matoorrada walaaqaya. Waxaan gelineynaa macluumaadka baloogga, sida liiska xiriiriyeyaasha iyo ilaha macluumaad dheeri ah oo ku saabsan noocan ah motores, sidaas darteed waxaan u maleynayaa inay ku habboon tahay in la sharraxo sababta aan ugu arko inay xiiso ii leeyihiin ...
El walaaqa waa matoor, kaasoo ka dhashay isku day kale oo lagu beddelay mashiinka uumiga. Waxay u baahan tahay oo keliya il kuleyl ah oo shaqeyneysa iyo wax soo saarka la helay ayaa aad u wanaagsan. Aragti ahaan waa tan kaliya ee awood u leh helitaanka waxqabadka Carnot iyo ficil ahaan iyo xawaare hoose, waxay yiraahdaan way dhowdahay. Waxqabadka Carnot waa kan ugu sarreeya ee suurtagal ah matoorada kuleylka.
Saldhigga Qorraxda ee Almería Waxay dhiseysaa qalab ballaaran si loogu beddelo dhaqdhaqaaqa mootada tamar koronto, iyadoo xoogga la saarayo tamarta qorraxda si loo helo guluubka kulul ee mootada.
Kuwa idinka ah ee haddaba ka fikiraya uil cusub oo socod kuu sheegayaa in kastoo ay leedahay a waxqabad weyn su awood gaar ah way yar tahay, waxay uga duwan tahay matoorada kale ee gubida gudaha ee loo isticmaalo gawaarida.
Laakiin waxa sida aadka ah ii soo jiitay waxay ahayd inaan arko moodooyin yaryar oo la shaqeeya oo keliya kuleylka jirka bini'aadamku bixiyo. Ama koob bun ah.
Waa kuwan fiidiyowyo youtube ah oo fiiri haddii aan u degno shaqada si aan u dhisno mid ka mid ah kuwa yaryar.
Soo ururinta xiriiriyeyaasha xiisaha leh ee ku saabsan mishiinka walaaqaya.
Mashiinka sirdoonka ee Wikipedia. Gelitaanka Wikipedia ee loogu talagalay Mashiinka fadhiista, Dhadhankayga xoogaa caajis. Waa hubaal inay jiraan dad wax badan hagaajin kara.
Distal iyo Yuurow. Mashruuc balaaran oo loogu badalayo tamarta qoraxda tamarta la isticmaali karo matoorrada walaaqaya.
Mashruucii ugu dambeeyay ee shaqada. Ku saleysan mishiinka walaaqaya. Macluumaad iyo ilo xiiso leh ayaa laga heli karaa.
Teknolojiyad duugowday. Sharaxaad aad u qurux badan oo ku saabsan matoorrada walaaqaya
Mashiinka Stirling. Soo uruurinta weyn ee xiriiriyeyaasha oo ku qoran Ingiriis.
Stilling EngineLinks. Isku duubnaansho kale oo muhiim ah oo ku xirnaanta Ingiriisiga, waa wax laga xumaado in dhammaan macluumaadkaan aysan ku badneyn Isbaanish.
Haddii aad taqaanno ilo macluumaad oo dheeraad ah, ha ka waaban inaad ka tagto faallo waxaanan ku dari doonaa iskuxirka.
Sida loo dhiso mashiinka Stirling
Ka dib markii aan bilaabay in aad blog ka qorto waxyaabaha ku saabsan mashiinka walaaqaya, lamaanaheena, Jorge Rebolledo Wuxuu noo soo diray aragti qarxaysa oo ku saabsan dhismaha mashiin uu isagu sameeyay oo lagu dhiirrigaliyay fiidiyoow laga helay YouTube.
Maaddaama ay aad u weyn tahay, waxaannu u kala qaadaynaa dhismaha mashiinka saddex qodob.
Halkan kan ugu horreeya ayaa socda.
Mashiinka Stirling by Jorge Rebolledo